१४९३.४२ विन्दुमा नेप्से | गृहपृष्ठ
Home लगानी १४९३.४२ विन्दुमा नेप्से
१४९३.४२ विन्दुमा नेप्से
कात्तिक २०, काठमाडौं । सोमवार नेप्से परिसूचक १५ सय विन्दुभन्दा कमबाट शुरु भएर १५ सय मुनिमै बन्द भएको छ । कारोबार भएको ४६ मिनेटमा १ हजार ४ सय ८० दशमलव ९० विन्दुमा झरेको नेप्से दुई घण्टाको अवधिमा बढेर १ हजार ५ सय ३ दशमलव २८ विन्दुमा पुगेको थियो । त्यस पछि निरन्तर घट्न थालेको बजार अन्त्यमा ३ दशमलव शून्य ४ अङ्क घटेर १ हजार ४ सय ९३ दशमलव ४२ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । त्यो समयमा नेप्से परिसूचक पनि बढेको थियो । नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव २० प्रतिशत घटेको छ । लामो समयपछि बजार आधाघण्टा हरियो भएकोे थियो । विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रकाशित पहिलो त्रैमासिक विवरण नाफामुलक नभएपछि लगानीकर्ताहरुको मनोबल घटेको हो । बजार लगातार घटिरहेकाले पनि लगानीकर्ताहरु निरास भएका छन् ।
कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा १८ दशमलव २२ प्रतिशत घटेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण शून्य दशमलव २० प्रतिशत घटेर रू. १७ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ ।
यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव १५ प्रतिशत घटेर ३ सय १३ दशमलव ७३ अङ्क पुगेको छ । कारोबार भएका १ सय ६१ कम्पनीमध्ये ५२ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ८९ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २० कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । महुली सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ८ दशमलव १५ प्रतिशत बढेको छ । साथै, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा करीब ७ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ६० कम्पनीको ५ हजार ९ सय ९ पटकको व्यापारमा ११ लाख ५७ हजार ४ सय ६६ कित्ता शेयरको रू. ४९ करोड ११ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेप्सेमा सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार भएका १० कम्पनीमा सिटिजन्स इन्भेष्टमेण्ट ट्रष्टको प्रत्तिकित्ता रू. ३ हजार ७ सय ५० मा रू. ३ करोड २५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । साथै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, सिभिल बैङ्क, कुमारी बैङ्क, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, कृषि विकास बैङ्क, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क लिमिटेडको रू. १ करोड १६ लाखदेखि २ करोड सम्मको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा पाँच समूहको परिसूचक बढेको छ भने पाँच समूहको परिसूचक घटेको छ । परिसूचक घट्नेमा बैङ्किङ, व्यापार, विकास बैङ्क, बीमा र माइक्रोफाइनान्स रहेका छन् भने परिसूचक बढ्ने समूहमा होटल, जलविद्युत, वित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन र ‘अन्य’ समूह रहेका छन् । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ३२ दशमलव शून्य २ स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव ५८ रहेको छ । यसले बजार वियरिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।